AmaNootropics PRL-8-53: Thuthukisa Imemori Nekhono Lokufunda?
Ukubuka konke kwe-PRL-8-53
Umuzwa we I-PRL-8-53 njengesidakamizwa se-psychoactive sibuyele emuva ekuqaleni kwawo-1970. UNikolaus Hansl, uprofesa waseCreighton University, waqondana ngengozi wathola le nootropic ngenkathi esebenza kuma-aminoethyl meta benzoic acid esters.
Kusukela yaqala ukusebenza, lesi sengezo senze ucwaningo olulodwa lwangaphambi kokuhlolwa kanye nokulingwa komuntu. Ucwaningo lomtholampilo lwalungubufakazi bokugcina bokuthi i-PRL-8-53 yokutadisha ithuthukisa inkumbulo yesikhashana kanye nokuqephuza ngamazwi.
I-PRL-8-53 ayikakutholi ukugunyazwa kwe-FDA, kepha kuyisengezo esingahlelwanga e-US. Ungenza ngokukhululekile ukuthenga kwe-PRL-8-53 njengesidakamizwa esithengisa izinto ezingekho emthethweni.
I-PRL-8-53 isuselwa ku-benzoic acid ne-benzylamine. Ngokwesayensi, yaziwa njenge-3- (2- (benzyl (methyl) amino) ethyl) benzoate.
Kusukela ngasekupheleni kweminyaka yama-1970, i-PRL-8-53 bekuyiyona yonke intukuthelo njengesidakamizwa se-psychoactive sokuthuthukisa ukusebenza kobuchopho. Okungenani, kunesilingo esiphumelele somuntu esisekela ukusebenza kwaso. Ngaphandle kwalokho, ukubuyekezwa kwe-PRL-8-53 ku-Reddit kusekela ukusebenza kwalesi sengezo ekwenzeni ngcono inkumbulo nokufunda.
USolwazi Hansl ekuqaleni wakuthola lokho I-PRL-8-53 i-nootropic kuthuthukisa inkumbulo yesikhashana kanye nokukhumbula ngamazwi. Kodwa-ke, lesi sidakamizwa siphikisana nokucindezeleka, ukucindezeleka, ukukhathazeka nokukhathala.
Ngenxa yezifundo ezinganele zocwaningo ku-PRL-8-53, indlela esebenza ngayo yesenzo ngandlela thile iyimfihlakalo. Kodwa-ke, ososayensi bacabanga ukuthi umuthi uthuthukisa ukusebenza kobuchopho ngezindlela ezintathu.
I-PRL-8-53 nootropic yenza kusebenze uketshezi kwe-acetylcholine, eyi-neurotransmitter eyinhloko, ebhekele ukusebenza inkumbulo nokufunda.
Lesi sidakamizwa esisebenza ngokusebenza kwengqondo sisebenza ohlelweni lwe-dopaminergic ngokuguqula amazinga we-dopamine enempilo. Yini enye, ukuthatha Ukudangala kwe-PRL-8-53 umuthi uzophazamisa ukukhiqizwa ngokweqile kwe-serotonin. Lo mphumela uvala amazinga okucindezeleka ukuphatha ukukhathazeka, ukushintsha kwemizwelo, nokuqwasha.
Kukhulisa Amandla Okufunda
I-PRL-8-53 powder ifakazela ukuthuthukisa ikhono lokuqonda nelokufunda. Isengezo senza ukuthi kukhunjulwe imininingwane, amagama nemiqondo ehlukile. Ngakho-ke, sekuwumuthi ocutshungulwayo wokufunda phakathi kwabafundi abafuna ukuhamba ngesivivinyo esinzima.
I-PRL-8-53 yokufunda ingabuye ithuthukise ukugxila, ikakhulukazi lapho izama ukuqonda imiqondo emisha. Abanye osonkontileka abathi ukuthatha lesi sidakamizwa esihlakaniphile kukugcina usendleleni, futhi ngeke ube nenkinga ngenkathi uchaza izinto ezintsha. Lezi zinzuzo ze-PRL-8-53 kungaba wukusa okusha kwabantu abangama-brainy abaphokophela ezinye izivivinyo eziyinkimbinkimbi ze-physics noma izivivinyo zomlomo ezingekho emthethweni.
Omunye wemiphumela ebalulekile ye-PRL-8-53 ifaka phakathi ukukhuliswa kwememori. I-nootropic isebenzisa i-acetylcholine kanye nohlelo lwe-dopaminergic, olubalulekile ekuqondeni.
Esivivinyweni somtholampilo esihlanganisa izihloko zezempilo ezingama-47, uprofesa Hansl uqaphele ukuthi labo abathathe i-PRL-8-53 basebenze kangcono esivivinyweni sokukhumbula ukwedlula ababambiqhaza be-placebo. Ngaphandle kwalokho, le nkumbulo ingahlala cishe isonto lonke.
Ngaphambi kokuzama izifundo zabantu, uHansl wayeqaphele ukuthi i-PRL-8-53 izuzisa imiphumela yememori yamagundane. Ukwengezwa kwenza imodeli ye-murine ukuthi ikhumbule futhi ihlobanise impendulo nesimo esicindezelayo.
Kuthuthukisa Ukugqugquzela futhi Kunciphise Ukukhathala
I-PRL-8-53 yezidakamizwa zokucindezeleka ikhombisa izakhiwo ze-dopaminergic. Isakhi sandisa umsebenzi we-dopamine, ikhemikhali yobuchopho ethinta ukugqugquzela, imizwa ephakeme, kanye nokukhathala okunciphile. Ngakho-ke, ithuthukisa impilo yengqondo, nethuba lokuphikisana nokuphazamiseka kwengqondo okufana ne-ADHD ne-schizophrenia.
Ngaphandle kwemiphumela emihle ye-PRL-8-53, akufanele usebenzise i-nootropic njenge-sub yomuthi wakho kadokotela. Le nhlanganisela ayihloselwe ukwelapha noma ukwelashwa kwezifo.
Ungayithatha kanjani i-PRL-8-53?
Okujwayelekile Isikali se-PRL-8-53 cishe i-5mg ngosuku, ithathwa njengesengezo somlomo. Yize kunocwaningo olulinganiselwe ukusungula ibanga ledosi eliphephe kakhulu, isilingo sokuqala somuntu sisebenzise i-5mg. I-flick ngokusebenzisa ezinye izibuyekezo ze-PRL-8-53 iqinisekisa ukuthi abanye abasebenzisi abakhuthele bathatha okungaba ngu-10mg kuye ku-20mg wesengezo.
Uma ngabe unikeza isengezo ekwakhekeni kwenkumbulo yesikhashana esifushane, njengalapho uthatha isivivinyo, qiniseka ukuthi usisebenzisa amahora amabili ngaphambi kokuvivinya umzimba uqobo.
I-PRL-8-53 nootropic itholakala ngama-powder, amaphilisi, namafomu oketshezi. Ungakhetha ukugwinya ithebhulethi noma ukuyifaka esiphuzweni sakho; noma yikuphi okukuvumelayo. Yize ungakhetha ukuphathwa kwezilimi ezimbalwa, le ndlela ingahle ibe ndikindiki olimini lwakho. Abasebenzisi abaningi bangathanda ukuthatha i-PRL-8-53 ngomlomo.
Njengamanje, asikho isincomo se-PRL-8-53 esihle. Ukusebenzisana okungahle kube khona kwalesi sakhi nezinye izidakamizwa ze-psychoactive akwaziwa. Ngaphandle kwalokho, i-PRL-8-53 inamandla amakhulu, ngakho-ke, akudingekile ukuyihlanganisa namanye ama-nootropics akhulisa inkumbulo.
Asiphakamisi noma sincoma noma yini Isitaki se-PRL-8-53. Okungenani, kungaba ngcono uma ungalokothi ubhekane nezidakamizwa ezihlakaniphile ezinemiphumela efanayo. Ngaphandle kwalesi sexwayiso esiqatha, abanye abasebenzisi ngaphakathi komphakathi we-psychonautic bayavuma ukuthi ukufaka i-PRL-8-53 powder nge-Alpha-GPC, i-piracetam, i-IDRA-21, ne-theanine kubanikeza izinzuzo ezinkulu zokwelapha.
Ngabe kukhona imiphumela engemihle ye-PRL-8-53?
Kuze kube manje, ayikho imiphumela emibi ebhaliwe ye-PRL-8-53. Izinsizakusebenza ezitholakalayo kuphela ezibuyela emuva kuma-1970s ngesikhathi sokuhlolwa komtholampilo kanye nokwelashwa kwangaphambili kwe-nootropic. Esifundweni somuntu, ababambiqhaza abakhombisanga zimpawu ezimbi kumthamo we-5mg ngosuku.
Yize ingekho imiphumela emibi yomtholampilo ye-PRL-8-53 eserekhodini, qiniseka ukugcina imithamo ephansi. Ngokuya ngocwaningo lwamagundane, amanani aphezulu alesi sithasiselo aphazamisa ukunyakaza.
Okuhlangenwe nakho kwabasebenzisi
Kunokuhlangenwe nakho okungenakubalwa komsebenzisi esitolo seReddit neAmazon maqondana nemiphumela ye- Ukukhathazeka kwe-PRL-8-53 i-nootropic.
Bheka okunye kokubuyekezwa kwe-PRL-8-53;
Ukufunda neMemori ngcono
“Ngisebenzisa kakhulu i-PRL-8-53 kakhulu lapho nginezinkulumo engizibamba ngekhanda. Kwenza umehluko omkhulu ekutheni ngingazigcina kanjani ngekhanda izinto ngokushesha. ”
“Ngikubonile ukukhuphuka kokukhuluma ngamazwi nePRL uqobo. Kuhlanganiswe ne-caffeine, kuyithuluzi elihle lokutadisha. ”
“Ngaqala ngemithamo emincane futhi ngasebenza ngaya phezulu kakhulu. Ngempela nginomuzwa wokuthi i-10mg ingumthamo omuhle wansuku zonke… Kodwa-ke, nginqume ukuzama ama-20mg ngoLwesihlanu ukuze ngihlolwe iNeuroscience futhi ngamangazwa ukukhushulwa kokukhunjulwa… Ngizwe ukuthi amanani amakhulu kakhulu asizile ekukhumbuleni futhi abewusizo olukhulu ekuhlolweni . ”
"Ngiyithatha ekuseni lapho ngivuka (ngo-11 ekuseni) nge-Noopept, L-theanine, bupropion, vortioxetine, ne-tianeptine ... Akunakwenzeka ngempela ukubona ukuthi kwenzenjani ngesitaki esinzima kangaka semithi ngokuya ngamakhomishini…"
“Njengamanje ngenza i-IDRA-21 nePRL-8-53 zonke izinsuku. Ngiyayithanda inhlanganisela, futhi yenza kube lula ukubamba ngekhanda nokuqonda imiqondo emisha. ”
“Njengezilimi eziningi eziqoshiwe, kunambitheka kabi kabi. Kodwa-ke, ayimbi kangako njengoNoopept… izophinda futhi yenze ulimi lwakho lube ndikindiki izikhathi ezimbalwa zokuqala… Izinzuzo zikwedlula impela ukunambitheka. ”
Imiphumela emibi ye-PRL-8-53
“Ngithole inkumbulo ebi kakhulu ngemuva kokuthi imiphumela idinwe ngisho nemithamo emincane. Ngemuva kwesilinganiso sokugcina, ngaba nomuzwa ongachazeki, futhi ongakhululekile. ”
Umsebenzisi ongaziwa uthi;
"Emithamo engaphezulu kuka-30mg ngomlomo nangama-15mg ngezinhlamvu ezincane, ngaphathwa yikhanda futhi kwaba nomphumela omangazayo maqondana nombono wami."
I-PRL-8-53 powder iyi-nootropic ethembisayo ehlala ingahloliswanga endaweni yesayensi. Ubufakazi obubonakalayo bokusebenza kwawo buneminyaka engamashumi amahlanu. Kodwa-ke, ama-neurohackers anomdlandla asebhange kuwo njengesithuthukisi sememori esinemiphumela engemihle ye-PRL-8-53.
Isengezo silungele inkumbulo yesikhashana. Imininingwane eqoqwe kubasebenzisi abanolwazi nezifundo zocwaningo ezitholakalayo ziqinisekisa lokho Ukukhathazeka kwe-PRL-8-53 umuthi uzothuthukisa inkumbulo kuze kufike ku-200%.
Ukusebenzisana kwale nootropic nezinye izidakamizwa kusese yimfihlakalo. Ngakho-ke, ukuphepha nokubekezelelana kwayo akwaziwa. Ngakho-ke, ukuzama isitaki se-PRL-8-53 akuyona inketho futhi. Xhumana nodokotela wakho ngaphambi kokuthatha i-PRL-8-53 kanye neminye imishanguzo kadokotela.
Ungenza ukuthenga kwe-PRL-8-53 kufomu le-powder noma lephilisi njenge isengezo se-nootropic.
UHansl, NR, noMead, BT (1978). I-PRL-8-53: Ukufunda okuthuthukisiwe nokugcinwa okulandelayo kubantu ngenxa yemithamo ephansi yomlomo ye-ejenti entsha ye-psychotropic. I-Psychopharmacology (i-Berl).
UHansl, uNR (1974). I-spasmolytic yenoveli ne-ejenti esebenzayo ye-CNS: 3- (2-benzylmethylamino ethyl) benzoic acid methyl ester hydrochloride.
UMcGaugh, JL, noPetrinovich, LF (1965). Imiphumela yezidakamizwa ekufundeni nasenkumbulweni. Ukubuyekezwa Kwamazwe Ngamazwe Kwe-Neurobiology.
UKornetsky, C., Williams, JE, nenyoni, M. (1990). Imiphumela yokunaka kanye nokukhuthaza yezidakamizwa ze-psychoactive. I-NIDA Research monograph.
UGiurgea, C. (1972). I-Pharmacology yomsebenzi wokuhlanganisa wobuchopho. Ukuzama umqondo we-nootropic ku-psychopharmacology. I-Pharmacol yangempela (eParis).
IHindmarch, I. (1980). Umsebenzi we-Psychomotor nezidakamizwa zengqondo. IBritish Journal Yezemithi Yezokwelapha.
I-RAW PRL-8-53 POWDER (51352-87-5)
Ukubuka konke kwe-1.PRL-8-53
3.PRL-8-53 indlela yokwenza
5.Ungayithatha kanjani i-PRL-8-53?
7. Ngabe ikhona imiphumela emibi ye-PRL-8-53?
Okuhlangenwe nakho kwe-Uers